आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा अगाडिः अर्थमन्त्री बोहरा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा, बेरोजगारीको दर घटाउँछौँ
जीवन बिष्ट धनगढी, १७ जेठ
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रदेशगत प्रक्षेपणअनुसार चालू आवमा सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने भएको हो ।
यस वर्ष यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.०८ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर भने २.२८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । यसैबीच, प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा शिलापत्रकर्मी जीवन विष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरासँग कुराकानी गरेका छन्ः
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृृद्धिदर सबैभन्दा माथि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको आधार के होला ?
हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने भएको छ । प्रदेशगत प्रक्षेपण गरेर चालू आवमा सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने भएको हो ।
यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.०८ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । जबकी समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर भने २.२८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । हाम्रो प्रदेशले सबै प्रदेशभन्दा भन्दा र राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा बढी हुने भनेको छ । यसको मुख्य आधार कृषि नै हो । यहाँ बढी सम्भावना कृषिमा छ ।
सुदूरपश्चिममा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव छ । हामीले अझै वैज्ञानिक ढंकले कार्यक्रम सुरू गर्न आवश्यक छ । हाम्रो प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा राम्रो बजेट विनियोजन गरेकाले उपलब्धि देखाउँदा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हाम्रो प्रदेशमा हुने भनेर प्रक्षेपण गरिएको हो ।
आर्थिक वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्दो क्रममा छ, यसलाई अझ उच्च बनाउन प्रदेश सरकारको योजना के छ ?
यो वर्ष कृषिमा गत आवभन्दा ३२ देखि ३५ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गर्दैछौँ । गत वर्ष हामीले कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड रकम दिएका थियाैँ । यो वर्ष ३ अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयलाई पठाएका छाैँ ।
अब कृषिबाट नै बेरोजगारलाई रोजगार दिने, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने र जीविका उपार्जन गर्नको लागि मात्र होइन कृषि व्यवसायीमुखी बनाउनको लागि पनि कृषिलाई बजेट बढी दिएका छाैँ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै छाैँ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाने निश्चित छ । कृषकका समस्या समाधानका लागि अनुदान, मल बिउबीजन, मलको सहज उपलब्धतासँगै गुणस्तर कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्दैछाैँ ।
त्यसाे भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकतामा कृषि हो ?
अहिले हामीले हेर्ने भनेको कोभिड-१९ ले प्रभाव पारेको क्षेत्र हो । हामीसँग उद्योग, कलकारखाना छैन । अरू उत्पादन छैन हामीसँग भएको कृषि नै हो । हामीले कृषिमा लगानी बढाउने र त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य, उद्योग पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दछाैँ । प्रदेशको बेरोजगारी दर घटाउन र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कृषि नै हो ।
कोरोनाका कारण धमाधम विदेश गएका नेपाली घर फर्किँदै छन् । अब उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिन प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?
यो एउटा चुनौतीको कुरा हो । यसमा तिनै तहको सरकारको विशेष समन्वय हुनुपर्छ । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वरोजगार विकासकोष ल्याएको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले १ अर्बको बिउ पुँजी कोषमा छ । किसानलाई हामीले न्यूनतम ब्याजदरमा पुँजी, बिना धितोमा ऋण दिने योजना बनाएका छौँ । उनीहरूलाई चाहिने तालिम दिन्छाैँ, सचेतना गराउँछौ ।
अहिले आउने विकास निर्माणका कुराहरूमा रोजगारी बढाउँछौ । कृषि, उद्योग, पर्यटनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छौँ । जो विदेशबाट अथवा भारतबाट आउनुभएको छ उनीहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउँछाैँ । जो बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ, जो भारतबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तेस्रो मुलुकबाट आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोषबाट र प्रदेश सरकारको बजेटबाट रोजगारी प्रदान गर्छौँ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुगेका छाैँ, समग्रमा कस्तो रह्यो यो आर्थिक वर्ष, मुख्य उपलब्धि के हुन् ?
पहिलो त हामीले प्रदेशमा वित्तीय सम्मेलन गर्‍याैँ । संघीय सरकारले पनि गर्न नसकेको कुराहरू प्रदेशबाट हामीले गरेका छौँ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसबाट हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन धेरै कुराहरू सिकेका छाैँ ।
यो वर्ष विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा बढाउने सोचेका थियौँ । तर, कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण प्रभाव पर्‍याे ।
सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ । तर, प्रदेशको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न सफल भएका छौँ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनायो । अहिले यसैसँगै लडिरहेका छाैँ । यो चुनौतीकाबिच पनि प्रदेश सरकार अवसर खोज्दै अगाडि बढी रहेको छ ।
चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर हामीले बजेट ल्याएका थियाैँ । तर, कोरोना कहरका कारण सोचेजस्तो कार्यक्रम गर्न सकिएन । ५० प्रतिशतभन्दा तलमाथि खर्च हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ । त्यसबाट बचेको बजेटलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागी स्रोतकारूपमा राखेर जान्छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा ५ देखि ६ अर्ब बढी रकमको हुन्छ । बढेको रकमबाट जनताका अपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदै छ ?
चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा आगामी आवमा बढाएर ३३ अब हाराहारी पुर्‍याउँदै छाैँ । आगामी बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीज्यूले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । हामी यसमा सुझाव मात्र दिन्छौँ । अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । १९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । विशेष गरी अहिलेको समस्या समाधान र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित छौँ ।
प्रदेशको मुख्य प्राथमिकतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र छन् । हामीसँग सीमित वित्तीय स्रोत र असीमित उद्देश्य छन् । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार हुन्छ । १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकोले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । बजेटको आकार करिब ३३ अबको हुने अनुमान छ ।
सबैभन्दा धेरै रोजगारीको क्षेत्र कृषि हो । समग्र आर्थिक वृद्धिदरको ३७ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ । बजेटमा यो क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पायो भने हाम्रो खाद्य संकट टर्छ । रोजगारीको समस्या पनि हल हुन्छ । अहिलेको समस्या पनि हामी यसरी नै समाधान गर्छौँ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनको कुराहरूमा पनि नयाँ नीति ल्याउँछौँ । यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउने, प्रदेश आत्मनिर्भर हुने र भारत लगायतका मुलुकबाट आउनेहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छौँ ।
संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ? केन्द्रबाट बजेटमा सुदूरपश्चिम कुन स्थानमा छ, कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म सन्तुष्ट छु । जुनसुकै मुलुकको बजेटले सबैको चित्त बुझाएर आउँदैन । त्यसैले यो बजेटमा यथेष्ट प्रयास भएको छ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राम्रो बजेट ल्याउनु भएको छ । यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै कुराहरू समेटिएका छन् ।
बजेटमा सुख्खा वन्दरगहाको कुरा कञ्चनपुरमा, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एयरपोर्ट, महाकाली सिँचाई आयोजना पनि आयोजनामा राखिएका छन् । रानी जमरा सिँचाई, दिपायल खुटिया सडक, पश्चिम सेतीको लगानी कर्ता खोजिने, सेती लोक मार्गलाई पनि बजेट छुटटाईएको छ । यी सबै कुराहरु बजेटमा अटाएका छन् ।
अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा धेरै कुुुरा आएका छन् । बजेटमा सीमित स्रोतकाबिच पनि हाम्रो प्रदेशका धेरै कुराहरू आएका छन् । यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, १३:२०:००
‘दसैँंमा जनतालाई जयनगर-जनकपुर रेल उपहार दिन्छौँ’